Ukukhokhwa sokubeletha e 2012
Ukukhulelwa - kuyinto ngenkathi ephawulekayo lapho konke kuba elikhanyayo, amtoti. umama okhulelwe kufanele iqaphe ngokucophelela impilo yabo, ngoba ngaphakathi likhula futhi ithuthukisa isimangaliso sangempela, okuyinto vele edinga ukunakekelwa ngamadodana awo nokuthi ayawathanda. Phakathi nale nkathi, ubudlelwane phakathi kwabashadile iba indoda ezidabukisayo ngaphezulu, ngoba siqaphela ukuthi maduze ube ubaba, uqala ukuzizwa imizwa yabo ozithandayo ukufudumala. Lo wesifazane, eqaphela injabulo umama esizayo, selithamba, ebucayi. Ukukhulelwa - inkathi ezingeke nje ukusinda.
Namuhla, kunamabandla izinkokhelo esikhethekile nenkathi yokukhulelwa nokubeletha, okuvumela ukuba babe nomntwana is injabulo hhayi kuphela, kodwa futhi ukuchuma yasekuqaleni zezimali. Ngakho, owesifazane unelungelo lokuthathwa njengomsulwa sokufaka isicelo sokuxhaswa kungakhathaliseki ukuthi iyasebenza noma ungaphakathi esiteji "besifazane". Kodwa izilinganiso abanye isinxephezelo zehluke. Ngokwesibonelo, uma owesifazane okhulelwe okwamanje, ngeke ukwazi ukuthola sokubeletha onikelwa emsebenzini. By the way, inkokhelo enjalo konke omama abasebenzayo, kuphela isamba sazo zonke ziyehluka, kuye ngokuthi iholo ummeleli ngamunye. Sokubeletha ingatholakala kumqashi, uma sikhishwa uyibhala esibhedlela, onikelwa e emtholampilo, ukuphi wokuthi umama okhulelwe ku-akhawunti.
Ukukhokhwa womama zihlanganisa yinhlama-sum inzuzo ukuze kokuzalwa kwengane yakho. Thola "umvuzo" Ungaqiniseka ngokuphelele bonke abesifazane ababa kungakapheli izinyanga eziyisithupha kusukela ngosuku lokuzalwa kwengane ukunikeza amaphepha adingekayo ukuze ehhovisi Isikhwama umshwalense wendawo. Uma umuntu wesifazane okhulelwe izele amawele, ezintathu, noma izingane ezingaphezu kwezintathu ngesikhathi, lokhu nesabelo ikhokhelwa umntwana ngamunye. Ngo-2012, inani lokukhokha liye landa futhi manje simi ku-ayizinkulungwane ruble nambili amane nanhlanu kanye kopeks ambalwa. Uma ingane nganoma yisiphi isizathu, akukho abazali, nesabelo esiyakuqokwa umnakekeli. Kodwa noma kunjalo, imali oyitholile ungumuntu oyedwa.
Ukukhokhwa womama futhi zihlanganisa inkokhelo yesikhathi esisodwa, owesifazane kuthiwa wenza bhalisiwe e esibhedlela i enkathini yokuqala isikhundla sakhe - amasonto nambili. Thola lo mhlahlandlela may abesifazane abasebenza futhi labo abaye sichithiwe ngenxa ekuvalweni kwenhlangano, futhi ngendlela lo mama, kuncike nezinye izahluko ezithile umthetho. Ubukhulu balesi isinxephezelo 2012 kuyinto ruble amane namashumi ayisithupha nanhlanu, okungukuthi, abanye omama aphambili yokuthi ningakwenqabi isikhundla sabo.
Ukukhokhwa womama yabelwe wonke ngokulinganayo, kungakhathaliseki ubudala, isimo kanye ubudala emsebenzini. Kodwa ezinye izinzuzo, okuyinto baqokwa omama ingane ukunakekelwa ingahluka ngezimali. Ngokwesibonelo, uma owesifazane ngesikhathi sokukhulelwa abangasebenzi, khona-ke kumelwe zisebenze uMnyango ukuvikelwa komphakathi endaweni ukubhaliswa kwaso. Kulokhu, ukukhokhwa yokukhulelwa nokubeletha Kuzoqokwa ngesilinganiso esincane. Angabonelela isaneli ungathola hhayi komama kuphela, kodwa futhi obaba, odadewenu, omkhulu nogogo noma omunye umuntu, uma iyohlala nengane lapho unina ephuma emsebenzini wakhe.
Izinkokhelo ukuze ukukhulelwa abangasebenzi imikhiqizo yakho baby ukunakekelwa kuyinto ruble 2326 penny ingane yabo yokuqala futhi 4651 - I-yesibili, njalo ngenyanga, kuze kube iminyaka eyikhulu nengxenye. Ukuze ukusebenza omama inzuzo kufanele kube amaphesenti amane nomholo wakhe isilinganiso. Ngenxa yalezi izinkokhelo owesifazane kufanele uxhumane iziphathimandla ezifanele, uma usebenza - okuthile ku inkampani yakho - uma kungenjalo, khona-ke kuze kube kuvikeleka kutenhlalo sabantu.
Izinkokhelo kanye nezinzuzo kwabesifazane abakhulelwe ukusiza abazali abasha ukusingatha ekuqaleni, ukubeka ingane on the imilenze ukuze uyobanakekela ingane. Ngenxa enano isimo sezimali akusho luntengantenge.
Varicose emithanjeni ngesikhathi sokukhulelwa - Ukwelashwa izimbangela
Rosehip ekukhulelweni kusiza ukuqinisa umzimba
Yiziphi amathuba ngeminyaka abaye bakhulelwa phezu Zama lokuqala? Lapho awokuthi ngeminyaka abaye bakhulelwa?
Can eyodwa ubuhlengikazi umama ukhukhamba, izithelo nemifino
Limoncello Italian ekhaya
Urea egazini. Uphakamisa uphinde wehlise okuqukethwe
Ukuvimbela isifo sokuqina kwemithambo yegazi
Vaz 21093 - engumngane zikanokusho okuthembekile
Amathiphu bamazinyo kukangaki ngosuku udinga ukuxubha amazinyo akho